Hanazatra ny Dorados i Maradona | NewsMada
Hanazatra ny Dorados i Maradona
Nalain’ny Dorados de Sinaloa, ekipa D2 any Meksika, ho mpanazatra azy ilay kintan’ny baolina kitra arzantin, i Diego Armando Maradona. Nampahafantarina ny mpanao gazety, ny alatsinainy lasa teo, izany. «Tiako hatolotra ny ekipa Dorados izay rehetra tsy hita tato amiko nandritra ny fotoana narariako, tao anatin’ny 14 taona», hoy i Maradona, nanoloana ireo mpampahalala vaovao, miisa 200.
Tsiahivina fa aretina vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina ny nankarary an-taony maro ity mpilalao kalazalahy arzantin ity. Faha-13 amin’ny ekipa 15 miatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Meksika, eo amin’ny D2, ity klioba hoentin’i Maradona ity.
«Mila mitady fandresena isika fa tsy hiaro tena. Tsy tonga hitsangantsangana izahay na hanao fizahantany fa hiasa”, araka ny nambarany. 57 taona ankehitriny i Maradona ary fanamby goavana ho azy ny hibatan’ny Dorados de Sinaloa ny ho tompondaka. Marihina fa fananan’ny fianakaviana iray akaiky ny fitondrana any Meksika ity klioba tantanan’i Maradona ity. Tsiahivina fa efa nanazatra an’i Arzantina i Maradona, ny taona 2008-2010. Firenena nametrahan’i Maradona tantara i Meksika satria tao no nahazoany ny ho tompondaka eran-tany, ny taona 1986, ary nampisongadina azy teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, nandreseny an’i Angletera ka nampidirany baolina roa. Ny iray, namitapitahany mpilalao anglisy miisa 5 ary ny iray, baolina novonoiny tamin’ny tanany ka nampalaza ilay fitenenana hoe : “la main de Dieu”.